Faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa weerar shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan Mandera – The Voice of Northeastern Kenya
Faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa weerar shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan Mandera
Masuuliyiinta laamaha amaanka ee maamul goboleedka Mandera ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weeraro shalay galinkii hore ilaa habeen hore ka dhacay magaalooyinka Lafey iyo Fino ee ka wada tirsan Mandera.
1 askari oo ka tirsan ciidamada amanaka ayaa ku dhintay halka 6 kalena ay ku dhaawacmeen weerar loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso oo lala eegtay gaari ay saarnaayeen ciidamada amaanka.
Qaraxaan ayaa ka dhacay inta u dhaxeysa magaalooyinka Fino iyo Lafey.
Ciidanka dhacdadaasi la kulmay ayaa xiligaas ku wajahnaa magaalada Lafey ee maamul goboleedka Mandera, iyagoo damacsanaa in ay u soo guur galaan xaaladda ka jirta halkaasi kadib markii habeenimadii khamiista soo galeysay ay dabley lagu tuhunsanyahay al shabab weerareen isla markaana burburiyeen bir anteeno ah oo ay keedahay shirkadda isgaarsiinta ee Safaricom.
Ku xigeenka gudoomiyaha maamul goboleedka Mandera ee qaabilsan bariga Mandera David Mbevi ayaa idaacadda Star Fm u xaqiijiyay dhacdadaasi iyo qasaaraha ka dhashay.
Laamaha amaanka ee ka howl gala Mandera ayaa mudooyinkaanba waday kooxo hubeysan oo lagu tuhunsanyahay al shabab, kuwaasoo dhaqdhaqaaqyo amni darro oo soo noqnoqday ka fuliyay deegaanno ka tirsan maamul goboleedka Mandera.
← Waalidiinta oo dawladda ka dalbaday in ay gar gaar dayactir loogu sameynayo qeybaha jiifka scholada ay u fidiso
Isbahaysiyada CORD iyo Jubilee oo ka wada heshiiyay tarikhda Doorashada xigta ay dalka ka dhici doonta →
1 thought on “Faahfaahin dheeraad ah oo kasoo baxaysa weerar shalay ka dhacay deegaanno ka tirsan Mandera”
bloggers made excellent content material as you did, the net might be a lot more helpful than ever